Ogaden News Agency (ONA) – Arimhii ugu dambeeyay iyo xaaladda gacan-ku-dhiigle Cabdi iley
Arimhii ugu dambeeyay iyo xaaladda gacan-ku-dhiigle Cabdi iley
Warar aad u tirabadan aadna u xiisa leh ayaa la’isla dhex marayaa magaalooyinka waaweyn ee dalka oo saacad hadaad dhigto teleefoonka aad maqli war ka duwan midkii hore oo ka xiisa badan midkii hore. Sidoo kale shabakadaha sida aadka ula socda arimaha ka jira magaala madaxda Jigjiga ayaa waxyaaba badan ka qoraya xaaladda uu ku sugan yahay gacan-ku-dhiigle Cabdi Iley.
Ugu horeyn shabakadda radio-Jigjiga oo arimaha ka socda dalka aad ugu dhuun duleela ayaa warbaixintii ugu dambaysay ey helaan oo cinwaan ay uga dhigeen – Muxuu Cabdi iley kala kulmay safarkiisii looga yeedhay Addis Ababa? ku sheegay; in sadexda madaxweyne ku xigeeno oo iyagana looga yeedhay Adisababa iyo gudoomiyaha baarlamaanka loo sheegay iney iska soo xulaan qofkii lagu badali lahaa Cabdi Iley, arintaasoo ay sheegeen RJ in si gooni ah loogu xaqiijiyey. Waxay kaloo qortay shabakadda RJ in lagu wargaliyay Cabdi iley in gabi ahaanba albaabada layskugu dhuftey maleeshiyada LB, loona sheegay in intooda haysta qoryaha culculus sida machinegun-da marka hore lasoo xareeyo, maleeshiyada hubkan ku hubeysan oo sida la sheegayo badankoodu ku sugnaa gobolada Jarar, iyo Qoraxay.
Shabakadda Faafan ayaa iyaduna war dagdag ah ku sheegtay in gacan-ku-dhiigle Cabdi iley la dhigay Isbitaalka militariga Adisababa ka dib markii lagu soo booday habeen hore xagga wadnaha. Arintaa oon wax ka weydiinay dad xog-ogaal u ah xaaladda Cabdi iley ayay noo sheegeen in tan iyo markuu dhintay KT Meles Zanawi uu Cabdi iley caafimaadkiisu fiicnayn isagoo cabsi badan ay la soo daristay gude iyo dibadba. Wuxuu ogsoon yahay dhagartii uu ka galay shacabka S.Ogadenya iyo dadkii uu ku xasuuqay dhamaan gobolada dalka. Dadka aan teleefoonada kula xidhiidhnay ayaa badankood waxay jeclaan lahayn in uusan ka dhimanin Cabdi Iley iyadoon aduunka lagu marinin ciqaabta uu mudan yahay.
Wararka kalee Faafan online ku qoran ayaa sheegay inay fanaaniintii u tumi jirtay maleesiyada Hawaarinta ay kala carareen iyagoo intii ugu dambeysay ee caanka ahayd ay u baxsadeen Hargaysa.
Halkan ka akhri warkaa FOL.
War qosol leh oo u dhigma rumayso ama ha-rumaysan (believe it or not) ayaa iyadana ka dhacay magaalada Dhagaxbuur todobaadkii tagay. Waxay noo sheegeen dad aan kala xidhiidhnay in dadweynaha magaalada la soo shiriyay sidii caadada u ahayd maamulka gumaysiga ee halkaa ka dhisan. Waxaana si cad loogu sheegay in maanta wixii ka dambeeya qofkii la arko isagoo caynaya ONLF oo ku sheegay magacyadii uu cabdi iley ula baxay xabsiga la dhigi doono. Waxay yidhaahdeen dadka aan la xidhiidhnay; “anagoo yaaban ayaan halkii ka soo dareernay oo qaarkeen ay rumaysan waayeen maqalkii dhagahooda oo dalbaday in loogu soo celiyo waxay maqleen.” Arintaa ayaa fasiraada badan yeelatay. Dadka qaar ayaa lahaa waa la heshiiyay, qaarna waxay lahaayeen lafahooda ayay u cabsanayaan oo waxay doonayaan in laga cafiyo dambiyadii ay ka galeen shacabka.
Si kastaba ha ahaatee waxaa jira dacaayada badan oo dhan walba kuu dhaafay oo qaarkood ay sirdoonka Itobiya ka dambeeyaan iyagoo ula jeeda inay akhriyaan dareenka dadweynaha iyo waxyaabaha ka horiman kara mustaqbalka.